२०७५ जेठ १२ शनिबार ०६:३१:००
नेपालमा चलचित्र समीक्षा कमै हुन्थ्यो । कसैले चलचित्र हेरेर लेख्न मन लाग्यो भने लेख्थे । नियमित रूपमा समीक्षा लेख्ने चलन थिएन । फाट्टफुट्ट समीक्षा लेखिने समयमा पत्रकार दीपेन्द्र लामा उदाए । त्यहीबेला दीपेन्द्रलगायत समकालीनहरूले चलचित्र समीक्षालाई नियमित बनाए । उनको कलम निकै कडा मान्थे निर्देशक तथा निर्माताहरू । ‘क्रूर समीक्षक’ भन्थे । हुन पनि उनी चलचित्रलाई ५ नम्बरमा शून्य नम्बर पनि दिन्थे । त्यही पच्दैनथ्यो चलचित्रकमीलाई ।
प्रजातन्तन्त्रको पुनरोदय भइसकेको थियो । चलचित्र निर्माण बाक्लै हुन थालिसकेका थिए । तर, चलचित्रमा नेपालीपन भेटिँदैनथ्यो । हिन्दी चलचित्रको फर्मुलामा बन्थे । त्यसबेला दीपेन्द्र मौलिक चलचित्र बन्नुपर्छ भन्ने विचार राखिरहन्थे । मौलिक कथा, पटकथा, चरित्र र प्रस्तुति नेपाली चलचित्रमा भेटिनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो । त्यही जगमा उनको कलम चल्थ्यो । तर तीन–चारवटा हिन्दी सिनेमाबाट कसैबाट कथा, कसैबाट संवाद झिकेर चलचित्र निर्माण भइरहेका थिए । दीपेन्द्र त्यसको चिरफार गर्थे । चलचित्रकर्मीलाई त्यही कुरा मन पर्दैनथ्यो ।
दीपेन्द्रले ०५७ मा ‘नयाँ सडक’ दैनिकबाट व्यावसायिक पत्रकारिता शुरु गरे । त्यसअघि नै मन लागेका बेला विभिन्न पत्रिकामा समीक्षा पठाउने दीपेन्द्रले ‘नयाँ सडक’मा आबद्ध भएपछि झन् चलचित्र समीक्षा नगर्ने कुरै भएन ।
तत्कालीन समय नेपाली रजतपटमा एकलौटी राज गरिरहेकी नायिका करिष्मा मानन्धरले ‘ढुकढुकी’ चलचित्र बनाइन् । करिष्माका श्रीमान् विनोद मानन्धर निर्माता थिए ।
त्यतिबेला सञ्चारमाध्यमहरूले कलाकारलाई पुल्पुल्याएर लेखिरहन्थे । शुभचिन्तकहरूले तारिफ गर्थे । आलोचना गरेर कसैले लेख्दैनथे । कलाकारहरू त्यसलाई आफ्नो लोकप्रियता र सफलता ठान्थे । आफ्नो बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको कसैले सहँदैनथे । हुन त अहिले पनि सहँदैनन् ।
त्यही समय प्रदर्शनमा आएको ‘ढुकढुकी’को आलोचनात्मक समीक्षा लेखे दीपेन्द्रले । आलोचना तार्किक नै किन नहोस्— विनोदले आपत्ति जनाए । ‘नयाँ सडक’ दैनिकको कार्यालयमै फोन गरे ।
“यस्तो खालको समीक्षा लेख्नु हुँदैनथ्यो । सारा मान्छेले चलचित्र मन पराएका छन् । तपाईंलाई चाहिँ किन मन परेन ?” विनोदले दीपेन्द्रलाई फोनमै थर्काउँदै निर्देशनै दिए, “आइन्दा यस्तो समीक्षा नलेख्नू । यसबारे म भेटेरै तिमीसँग लामो कुरा गर्छु ।”
विनोद रोकिएनन्, “यस्तो समीक्षा लेख्ने अधिकार कसले दियो ? थाहा छ, चलचित्र बनाउन कति गाह्रो हुन्छ ? फिल्मको बारे तिमीलाई के थाहा छ ?”
दीपेन्द्र चलचित्रकर्मीको रचनात्मक आलोचना गर्थे । चलचित्रकर्मीहरू भने दीपेन्द्रलाई भएभरको गाली गर्थे । गालीले दीपेन्द्रको कलम बन्द त के, थोरै भुत्तो पनि भएन । बरु झन् तिखारिँदै गयो ।
भुवन केसी सेतो पर्दाका लोकप्रिय नायक । उनको नामले मात्रै पनि हजारौं दर्शक हलसम्म पुग्थे । उनै भुवनले चलचित्र निर्माणको बाटो समाए ।
भुवन केसीका दुइटा चलचित्रको आलोचनात्मक समीक्षा गरे दीपेन्द्रले । उनको ‘सुपरस्टार’ हिन्दी चलचित्र ‘रंगीला’को हुबहु नक्कल थियो । दीपेन्द्रले समीक्षामा त्यही लेखिदिए । भुवनले केही भनेनन् ।
केही समयपछि चलचित्र ‘बादलपारि’को कार्यक्रम थियो । भुवनको भेट दीपेन्द्रसँग भयो । त्यहाँ भुवनले भने, “समीक्षा लेख्दा अलि सफ्ट भएर लेख्नुपर्छ ।”
‘सुपरस्टर’को प्रसंग सकियो । भुवन चलचित्र निर्माणको बाटोमा हिँडिरहेका थिए । ‘म तिमीबिना मरिहाल्छु’ उनको अर्को चलचित्र थियो । ‘नयाँ सडक’ दैनिकबाट दीपेन्द्र ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिक पुगिसकेका थिए । तर, भुवनका चलचित्रले भने फड्को मार्न सकेका थिएनन् । तामझामको प्रचारबाजी र स्क्यान्डलले चलचित्र प्रदर्शनपूर्व राम्रै ‘हाइप’ बटुले पनि ‘म तिमीबिना मरिहाल्छु’ दीपेन्द्रका आँखामा लायकको चलचित्र थिएन । उनले समीक्षा लेखे । ५ नम्बरमा जम्मा १ एक नम्बर दिए । समीक्षा रचनात्मक आलोचनाले भरिए पनि भुवनलाई त्यो सह्य भएन । अघिल्लो पटक ‘समीक्षा लेख्दा अलि सफ्ट भएर लेख्नुपर्छ’ भनेर सिकाएका भुवनले भनेजस्तो समीक्षा नआएपछि उनी ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकको कार्यालयमै आइपुगे ।
दीपेन्द्र कमलपोखरीस्थित ‘नयाँ पत्रिका’को कार्यालय पुगेर आफ्नै क्याबिनमा टाइप गरिरहेका थिए । भुवन उनलाई खोज्दै त्यहीँ आइपुगेछन् । संयोग ! भुवनले दीपेन्द्रलाई देखेनन् । उनले सम्पादकको कार्यकक्षमा पुगेर भनेछन्, “कहाँ हुनुहुन्छ दीपेन्द्र जी ? मलाई उहाँले सिकाइदिनुहुन्छ कि चलचित्र कसरी बनाउनुपर्छ भनेर ! सिक्नुपर्‍यो ।”
“उहाँको उद्देश्य हातपातै गर्ने त थिएन । उहाँ एक्लै आउनुभएको रहेछ । तर, मनोवैज्ञानिक रूपमा तर्साएर आगामी दिनमा आलोचनात्क समीक्षा लेख्न बन्द गराउन खोज्नुहुथ्यो,” दीपेन्द्र भन्छन् ।
०५७ सालबाट शुरु भएको दीपेन्द्रको पत्रकारिता यात्रा ०७५ सम्म आइपुग्यो । हजारौं चलचित्रकर्मीसँग उनको भेट भयो । चिनजान र परिचय भयो । विनोद र भुवनलगायत थुप्रै चलचित्र निर्माताले उनलाई धम्क्याए । तर, दीपेन्द्रको कलम लत्रिएन, मसी लत्पतिएन ।
नेपाली चलचित्र उद्योग सानो छ । त्यसमा पनि चिनिएका चलचित्रकर्मी र पत्रकार थोरै छन् । दिनदिनै भेट हुन्छ । चलचित्रबारे नै छलफल र बहस हुन्छ ।
नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र कोही हुँदैन ।’ त्यस्तै हो नेपाली चलचित्र उद्योग पनि ।
“नेपाली चलचित्र उद्योगमा चलचित्रकर्मी र पत्रकारबीच कहिल्यै पनि स्थायी दुश्मनी हुँदैन,” दीपेन्द्र भन्छन्, “पछि त्यही निर्माता तथा कलाकारले अर्को चलचित्र बनाउँछ । त्यतीबेला उसलाई त्यही पत्रकार चाहिन्छ । अहिले पनि भुवन केसीसँग मेरो भेटघाट भइरहन्छ । कुरा भइरहन्छ । सम्बन्ध राम्रै छ ।”
वायुको वेग कुनबेला कता बहन्छ, पत्तै हुँदैन । मान्छेका इच्छा, चाहना पनि कतिबेला परिवर्तन हुन्छन्, थाहा हुन्न । चलचित्र पत्रकारिता गरिरहेका दीपेन्द्रलाई चलचित्र निर्देशन गर्न मन लाग्यो । निर्देशन कसरी गर्ने, सोच्न थाले ।
उनी यहाँसम्म आउनुअघिको कथा लामो छ ।
चलचित्र पत्रकार हुनुअघि उनी भयंकर चलचित्रप्रेमी थिए । काठमाडौं स्वयम्भूमा जन्मिएका दीपेन्द्र सानो उमेरदेखि नै चलचित्र हेर्थे । जयनेपाल, विश्वज्योति, कुमारीलगायतका हल पुुगेर हेर्थे । चलचित्रले उनको मन खिचेको थियो । ठूलो भएपछि चलचित्रमा देखिन्छु भन्ने संकल्प गरेका थिए । चाइनिज कुङ्फु फिल्म हेर्ने दीपेन्द्रले उसु सिके । उसुमा डिप्लोमासम्म गरे ।
चलचित्रमा कसरी छिर्न सकिन्छ भनेर सोचिरहन्थे । पत्रपत्रिका पढिरहन्थे । पढ्दापढ्दै उनी लेख्नसमेत सक्ने भएका थिए । उनी फाट्फुट्ट चलचित्रसम्बन्धी लेख लेखेर पठाउँथे । छापिन्थे पनि ।
पुल्चोकस्थित डेरामा बस्दा चलचित्रकर्मी चेतन कार्कीसँग पसलमा उनको दिनहुँ भेट हुन्थ्यो । चेतनले नेपाली चलचित्रका पुराना कुराहरू सुनाउँथे । दीपेन्द्र मोहित हुन्थे ।
‘नेपाल समाचारपत्र’ले नेपाली चलचित्र राम्रो हुनका लागि के–के पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर पाठकमाझ प्रतियोगिता गराएको थियो । ०५५ सालमा सहभागी भएका दीपेन्द्र उक्त प्रतियोगितामा प्रथम भए । उत्कृष्ट लेख भनेर पत्रिकामा छापियो । प्रथम भएबापत तीन महिना उनको डेरामा निःशुल्क ‘समाचारपत्र’ आएको थियो ।
चलचित्र पत्रकारिता शुरु गरेपछि दीपेन्द्रको संगत नवीन सुब्बा, छिरिङरितार शेर्पालगायतका निर्देशकहरूसँग हुन थाल्यो । उनीहरू मौलिक चलचित्रका सूत्रधार थिए । एकातिर पत्रकारिता, एकातिर निर्देशकहरूसँगको निरन्तर भेटघाट । उनी हिन्दी, अंग्रेजी, चाइनिज, फ्रेन्च, इरानी चलचित्र हेर्थे । उसुका डिप्लोमा दीपेन्द्रलाई द्वन्द्व निर्देशक बन्नुपर्छ कि भन्ने थियो शुरुमा । तर, पछि चलचित्रको कप्तान निर्देशक हो भने किन अरु काम गर्नु भन्ने लागेर निर्देशकै बन्ने सपना साँचे ।
०६३ सालमा उनले अठोट गरे— निर्देशक बन्छु । पटकथा लेख्न थाले । त्यो बेलासम्म डिजिटल चलचित्र बन्न थालिसकेका थिएनन् । दीपेन्द्र पहिलो डिजिटल चलचित्र बनाउन कस्सिए । निर्माता पनि भेटिए । बन्लाबन्ला जस्तो भएको थियो । तर, उनी आफैंले आफ्नो समीक्षा गरे, “म अझै पनि निर्देशनका लागि परिपक्व भइसकेको छैन ।” उनी पछि सरे । सपनाले आकार ग्रहण गर्नै सकेन ।
निर्देशनलाई आकार दिन चलचित्रमा कतै न कतै आबद्ध भइरहनु नै थियो । आफूसँग भएको ज्ञानलाई थप बढाउँदै लैजानु थियो । ०७१ मा उनले चलचित्र ‘नागबेली’को पटकथा लेखे । चलचित्र बन्यो । त्यसपछि भने आफूलाई निर्देशनको मैदानमा उतार्न मन लाग्यो । ०७२ मा ‘घामपानी’को कथा लेखे । ०७३ मा खिचे । पहिलोपटक ‘घामपानी’बाट चलचित्र पत्रकार दीपेन्द्र लामा निर्देशक भए । उनको पहिलो प्रयासले नै उत्कृष्ट चलचित्र र निर्देशकमा धेरै अवार्ड पायो ।
पत्रकार हुँदा अरुका चलचित्रबारे कडा समीक्षा गर्ने दीपेन्द्रले कालान्तरमा आफैं चलचित्र निर्देशन गरे । उनको चलचित्रमाथि अरुले समीक्षा गर्ने भए ।
“मलाई आफ्नो चलचित्रबारे कहिल्यै पनि समीक्षकको कलम नरम होस् भन्ने अपेक्षा भएन । गुण र दोषका आधारमा तार्किक समीक्षा आओस् भन्ने मेरो अपेक्षा थियो,” दीपेन्द्र भन्छन्, “तर यहाँ सबै चलचित्र बुझेर समीक्षा गर्ने पत्रकार छैनन् भन्ने मलाई थाहा थियो । त्यसैले समीक्षा पनि त्यस्तै आयो ।”
चलचित्र समीक्षा गर्ने व्यक्तिको ज्ञान निर्देशकभन्दा धेरै हुनुपर्छ भन्ने दीपेन्द्रको मान्यता छ । नेपालमा बहुसंख्यक दर्शक अहिले पनि समीक्षा पढेर हल जाँदैनन् ।
“दुई–तीन वर्षयता भने सानो संख्याका दर्शक समीक्षा पढेर चलचित्र हेर्न जान थालेका छन्,” दीपेन्द्र भन्छन्, “डायस्पोरामा रहेका नेपालीहरू विशेषगरी समीक्षामा विश्वास गर्छन् । तर, सबै समीक्षकको समीक्षामा विश्वास गर्दैनन् । केही सीमित समीक्षकले मात्रै विश्वसनीय समीक्षा गर्छन् भन्ने धेरैलाई थाहा छ ।”
‘नयाँ सडक’ दैनिकबाट पत्रकारिता शुरु गरेका दीपेन्द्रले ‘नेपाल समाचारपत्र’, ‘स्पेस टाइम्स’, ‘नेपाल’, ‘नयाँ पत्रिका’, ‘नागरिक’, ‘नयाँ पत्रिका’ हुँदै ‘फरकधार डटकम’मा कलमको निब चलाए । ०७३ बाट चलचित्र निर्देशनमा होमिएका दीपेन्द्रले यो वर्ष ‘गोपी’ निर्देशन गर्दैछन् । वर्षमा एउटा चलचित्र निर्देशन गर्ने सोचमा रहेका दीपेन्द्रसँग आफूले सोचेजस्तो चलचित्र बनाउन गाह्रो रहेको अनुभव छ । दर्शकमा ‘फिल्म लिट्रेसी’ नबढेसम्म भनेजस्तो चलचित्र बनाउन नसकिने बताउने उनी अन्तिममा भन्छन्, “बजारमा जस्तो चलचित्र चलिरहेका छन्, निर्माताहरू त्यस्तै चलचित्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् । राम्रो विषयमा चलचित्र बनाऊँ भन्दा लगानी गर्ने व्यक्ति नै भेटिँदैनन् ।”